HTC Desire VC - အသုံးပြုသူ လက်စွဲ - ပံ့ပိုးမှုစင်တာ | HTC Myanmar
နာမည်စာရင်းသွင်းပါနောက်ဆုံးပေါ်ကို ရယူပါကမ်းလှမ်းမှုများ၊ အချက်အလက်နှင့် အရာအားလုံးကို HTC တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ကိုယ်ပိုင် HTC ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား?subscriptcheckerအထူး HTC နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကမ်းလှမ်းချက်များ ရွေးချယ်ရန်၊ ထုတ် ကုန်သတင်းအချက်အလက်နှင့် သတင်းအတိုအထွာများ အတွက် ကျွန်ုပ်ထံ အီမေးလ်ပေးပို့ပါ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုပြန်လည် ကြည့်ရှူပေးပါရန် ကျေးဇူးပြုပြီး ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါကျေးဇူးတင်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သင်တို့ရဲ့သတင်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် သင့်အားမကြာမှီ HTC ရဲ့သတင်းသစ်များကိုပေးပို့ ပါမည်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ__ စမတ်ဖုန်းများ
ထောက်ပံ့ပေးသည်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများစမတ်ဖုန်းများ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဆော့ဖ်ဝဲ + APPSအသုံးချ ပရိုဂရမ်များဖုန်း အင်္ဂါရပ်များကင်မရာပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးသည်
လက်စွဲစာအုပ် တစ်အုပ် ရွေးချယ်ပါလျှင်မြန်သော စတင်မှု လမ်းညွှန်အသုံးပြုသူ လက်စွဲ တွေ့ဆုံမှုအစီအစဉ်
‎HTC Desire VC‎
ပင်မ အထောက်အပံ့ > ‎HTC Desire VC‎
သင့်ဖုန်းအသစ်နှင့် အတူ ပထမ ရက်သတ်တပတ်
ချိန်ညျှိချက်ျများ နှင့် ဝန်ဆေမင်ျှုများ
အွန်လိုင်း သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများ
ရှာဖွေခြင်းနှင့် အင်တာနက် ဘရောက်ဆာ
ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် တေးသီချင်း
ဟဒ်ဝဲ နှင့် အခြား
Most HTC phones are able to detect which mobile operator you're using based on the SIM card you ...
သင်၏မှတ်သားထားချက်များကို ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့် စီမံခြင်း
The weather clock widget doesn't show on HTC BlinkFeed by default. This is because the...
နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ ဓါတ်ပုံများကို ရိုက်ယူပါ။ အကယ်၍ HTC Desire VC ကိုစကားဝှက်ဖြင့်ကာက...
သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများတွင် ဓါတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုခြင်း
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းသည် အဘယ့်ကြောင့် ပူနွေး (လာ) သနည်း။
ပိုမိုလေ့လာရန် ဤအကြောင်းအရာကို ဖတ်ပါ
သင်၏လူမှုကွန်ယက်များ၊ အီးမေးလ်အကောင့်များနှင့် ထို့ထက်ပို၍ ပေါင်းထည့်ခြင်း
Currently, you can only browse the phone's internal storage or an inserted storage card. Brows...
စမတ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြင့် ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခြင်း
If you're using the HTC Messages app, here's how to addasignature. HTC Desire VC အား ရှုခင်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာပြုလုပ်ခြင်း
သင်ရှုခင်းများအသုံးပြုပါက HTC Desire VC သည် လုပ်ဆောင်ချက်စုံလင်သည့် ဖုန်းဖြစ်လာနိုင်သည်။ ရှုခင်းမျ...
HTC Desire VC မျက်နှာပြင်ကို ဖမ်းယူခြင်း
ကစားနည်း တခုခုမှ အမှတ် များများ ရထားသည်ကို ပြလိုပါသလား၊ HTC Desire VC အကြောင်း ဘလောက် ရေးလိုပါသလာ...
လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွက် လက်ရှိရာသီဥတုအ‌ခြေအနေနှင့် ရာသီဥတြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကို စစ်ဆေးရန် ရာသီ...
လျှင်မြန်သော ချိတ်ဆက်များHTC Sync Managerအသစ်မွမ်းမံမှုများ
HTC Desire VCအကြောင်း ပိုမို လေ့လာရန်
Burmeseလျှင်မြန်သော စတင်မှု လမ်းညွှန်အသုံးပြုသူ လက်စွဲ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းလမ်းညွှန်
Myanmar© 2011-2016 HTC ကော်ပိုရေးရှင်း။သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒထုတ်ကုန်လုံခြုံမှု
နိုင်ငံများAustraliaÖsterreichBangladeshBelgiëBelgiqueBrazilCanada - EnglishCanada - FrançaisČeská republika中国DanmarkDeutschlandEspañaSuomiFranceΕλλάδαHong Kong香港HrvatskaIndiaIndonesiaIrelandItalia日本КазахстанAmérica LatinaMagyarországMiddle Eastالشرق الأوسطMyanmarNederlandNew ZealandNorgeРоссия и СНГPolskaPortugalRomâniaSchweizSvizzeraSuisseСрбијаSlovenskoSingaporeSri LankaSverige台灣ประเทศไทยTürkiyeУкраїнаUnited KingdomUnited StatesViệt NamAdditional SupportAustraliaÖsterreichBangladeshBelgiëBelgiqueBrazilCanada - EnglishCanada - FrançaisČeská republika中国DanmarkDeutschlandEspañaSuomiFranceΕλλάδαHong Kong香港HrvatskaIndiaIndonesiaIrelandItalia日本КазахстанAmérica LatinaMagyarországMiddle Eastالشرق الأوسطMyanmarNederlandNew ZealandNorgeРоссия и СНГPolskaPortugalRomâniaSchweizSvizzeraSuisseСрбијаSlovenskoSingaporeSri LankaSverige台灣ประเทศไทยTürkiyeУкраїнаUnited KingdomUnited StatesViệt NamAdditional SupportMyanmarနိုင်ငံများAustraliaÖsterreichBangladeshBelgiëBelgiqueBrazilCanada - EnglishCanada - FrançaisČeská republika中国DanmarkDeutschlandEspañaSuomiFranceΕλλάδαHong Kong香港HrvatskaIndiaIndonesiaIrelandItalia日本КазахстанAmérica LatinaMagyarországMiddle Eastالشرق الأوسطMyanmarNederlandNew ZealandNorgeРоссия и СНГPolskaPortugalRomâniaSchweizSvizzeraSuisseСрбијаSlovenskoSingaporeSri LankaSverige台灣ประเทศไทยTürkiyeУкраїнаUnited KingdomUnited StatesViệt NamAdditional SupportAustraliaÖsterreichBangladeshBelgiëBelgiqueBrazilCanada - EnglishCanada - FrançaisČeská republika中国DanmarkDeutschlandEspañaSuomiFranceΕλλάδαHong Kong香港HrvatskaIndiaIndonesiaIrelandItalia日本КазахстанAmérica LatinaMagyarországMiddle Eastالشرق الأوسطMyanmarNederlandNew ZealandNorgeРоссия и СНГPolskaPortugalRomâniaSchweizSvizzeraSuisseСрбијаSlovenskoSingaporeSri LankaSverige台灣ประเทศไทยTürkiyeУкраїнаUnited KingdomUnited StatesViệt NamAdditional Support
သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒထုတ်ကုန်လုံခြုံမှုအသုံးပြုခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ချက်များလျှို့ဝှက်ထားရှိရေး မူဝါဒထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများစမတ်ဖုန်းများတွဲဖက်ပစ္စည်းများသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များHTC တွင်အလုပ်လုပ်သည်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများUltrapixel ကင်မရာHTC လွှဲပြောင်းခြင်း စွမ်းအားပေးခြင်းHTC ConnectSitesHTC BlogHTC DevHTC ProGet Started (စတင်လိုက်ပါစို့)ကူညီဖြေရှင်းခြင်းကူညီဖြေရှင်းခြင်းဥပ​ဒေဆိုင်ရာသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒအသုံးပြုခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းမူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလုံခြုံမှုပိုမိုလေ့လာပါ။HTC သတင်းကဏ္ဍကုမ္ပဏီအကျဉ်းချုပ်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့်ဆိုင်သောတာဝန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများစမတ်ဖုန်းများတွဲဖက်ပစ္စည်းများတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများUltrapixel ကင်မရာHTC လွှဲပြောင်းခြင်း စွမ်းအားပေးခြင်းHTC Connectကူညီဖြေရှင်းခြင်းကူညီဖြေရှင်းခြင်းHTC သတင်းကဏ္ဍကုမ္ပဏီအကျဉ်းချုပ်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့်ဆိုင်သောတာဝန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များHTC တွင်အလုပ်လုပ်သည်SitesHTC BlogHTC DevHTC ProGet Started (စတင်လိုက်ပါစို့)ဥပ​ဒေဆိုင်ရာသီးသန့်ဖြစ်ခြင်းမူဝါဒအသုံးပြုခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းမူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလုံခြုံမှုပိုမိုလေ့လာပါ။မူပိုင်ခွင့် 2011-2016 HTC ကော်ပိုရေးရှင်း။ မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး။အသုံးပြုခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ချက်များလျှို့ဝှက်ထားရှိရေး မူဝါဒ